विवाहमा व्यभिचार त्याग्ने5तरिकाहरू | प्रार्थना अंकहरू
घर ईश्वरीय बैठक विवाहमा व्यभिचार त्याग्ने To तरिकाहरू
आज हामी वैवाहिक सम्बन्धमा व्यभिचारबाट टाढा रहने ways तरीकाहरू व्यवहार गर्नेछौं। प्रस्थान २०:१ In मा तिमीले व्यभिचार गर्नु हुँदैन। व्यभिचार सर्वशक्तिमान परमेश्वरसामु एउटा ठूलो अपराध हो। परमेश्वर पवित्रता चाहनुहुन्छ, उहाँ शुद्धता चाहानुहुन्छ त्यसैले व्यभिचारबाट अलग रहनु पर्छ भनेर बताउनुभयो।
व्यभिचारी हुँदा राजा दाऊदले आफ्नो परिवारमा समस्या ल्याए। उनले आफ्ना विश्वासी सेवक उरियाहकी स्वास्नीको विरुद्ध काम गरे। दाऊदले उरियाहसित सहवास गरे र गर्भवती भइन्। यदि यो पर्याप्त भएन भने, उसले आफ्नो पाप ढाक्न युरियालाई युद्धको मैदानमा मारेको थियो। आफूले गरेका कामका लागि परमेश्वर दाऊदसित प्रसन्न हुनुहुन्न, त्यसैले दाऊद र उरियाहकी पत्नीको गर्भधारणबाट जन्मेको बच्चाको मृत्यु भयो। ईश्वरले अपवित्रको बीउ निकाल्नु परेको थियो।
धेरै विश्वासीहरूलाई व्यभिचारबाट अलग रहन गाह्रो लाग्छ प्रबल प्रचारक वा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुँदाहुँदै। कहिलेकाँही हामी किन यस्तो व्यभिचारबाट टाढा रहन गाह्रो छ भनेर सोच्दछौं। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नु पर्छ कि किन परमेश्वरले व्यभिचार नगर्नु भनेर निर्देशन दिनुभयो।
भगवान् किन भने किन व्यभिचार प्रतिबद्ध छैन
यो विवाह को लागी भगवान को मूल आशय नष्ट
अवैध यौनसम्बन्धले विवाहको लागि ईश्वरीय आशयलाई बिगार्दछ। एक पुरुष एक्लै बस्नु ठीक छैन भनेर परमेश्वरले बताउनुभएको छ त्यसैले परमेश्वरले स्त्रीलाई पुरुषबाट बाहिर निकाल्नुभयो। भगवानको स्वाभाविक अभिप्राय पुरुषको लागि एक महिलाको साथ थियो। त्यसकारण उत्पत्ति २:२ the ले धर्मशास्त्र भन्छ, त्यसैले कुनै मानिस आफ्नो बाबु र आमालाई छोडेर आफ्नी स्वास्नीमा मिल्छ र ती सबै एउटै शरीर हुन्छन्। सेक्सको उद्देश्य यो विवाहको सीमा भित्र गर्नु हो। विवाहबाहिरको कुनै पनि यौन गतिविधि पाप हो र विवाहको उद्देश्य एक पुरुष र महिला सँगै हुनु र एक शरीर गठन गर्नु हो।
व्यभिचार विवाह को नष्ट गर्दछ
व्यभिचारले विवाहलाई नष्ट गर्दछ। जब एक पुरुष वा महिला व्यभिचार मा जान्छ, यो विवाह मा चीजहरूको प्रवाह लाई असर गर्नेछ। तिनीहरूका साझेदारहरूले यो कष्ट भोग्नेछन् र तिनीहरूका बच्चाहरूले यसबाट पीडित हुनेछन्। त्यहाँ अलौकिक करार छ जुन यौनसंग जोडिएको छ, यसले प्रतिबद्धता र एकता ल्याउँछ, यसैले परमेश्वरले विवाहको सीममा हुनुपर्दछ भनेर निर्देशन गर्नुभयो।
राजा उरियाहकी पत्नीसित बिहे गरेपछि र बच्चा जन्माएपछि राजा दाऊदको परिवारले व्यभिचारको चर्को महसुस गरे। मृत्यु उसको व्यक्तिको घरमा आएको थियो जसलाई परमेश्वरको हृदयले मान्छे मानिन्छ। दाऊदले बच्चाको ज्यान बचाउनको लागि व्यग्र प्रार्थना गरेतापनि, परमेश्वरले बच्चालाई लिएर जानुभयो। व्यभिचारले शान्तिलाई बिगार्दछ परिवार.
व्यभिचारले परमेश्वरको महिमा गर्दैन
परमेश्वर हामीले उहाँको पवित्र नामको महिमा नहराउने सबै कुरा त्यागून् भन्ने चाहनुहुन्छ। हाम्रो अस्तित्व को उद्देश्य परमेश्वर संग koinonia छ। मानिस र ईश्वरको बिचमा भएको कुराकानीलाई तोड्ने एक चीज भनेको पाप हो। अवैध यौनसम्बन्ध पाप हो जुन परमेश्वरको आत्माले ठूलो चोट पुर्‍यायो त्यसैले हामी योबाट अलग रहनू भनेर परमेश्वरले निर्देशन दिनुभयो।
भगवानले हामीलाई मात्र उहाँको पवित्र नामको महिमा गर्ने चीजहरूमा डुबिएको चाहनुहुन्छ। जब हामी व्यभिचारमा प्रवेश गर्दछौं, हामी ख्रीष्टको सुसमाचारलाई नकारात्मक नाम दिन थाल्छौं जुन पर्याप्त छैन।
व्यभिचार त्याग्ने पाँच तरिकाहरू
परमेश्वरको डर राख्नुहोस्
धर्मशास्त्रले भन्छ कि प्रभुको डर बद्लिनु हो। हामीलाई व्यभिचारबाट टाढा बस्नको लागि परमेश्वरको ज्ञान चाहिन्छ। यूसुफ साह्रै नै प्रभुको डर चिन्न सक्थे। त्यसैले गर्दा उनी भाग्न सक्ने बुद्धिमानी थिए। उत्पत्ति::: of को यस पुस्तकमा मबाहेक अरू कोही छैन, न त मैले तपाईंबाट बाहेक अरू केही राखेको छ, किनकि तपाईं उसकी पत्नी हुनुहुन्छ। तब मैले कसरी यस्तो ठूलो दुष्कर्म गर्न सक्छु र परमेश्वरको विरूद्धमा पाप गर्ने?
जोसेफले बुझे कि उसले गर्न चाहेको दुष्टता उसको मालिकको विरुद्ध मात्र हो तर यो परमेश्वरको विरुद्धमा पाप पनि हो। ऊ परमेश्वरसित धेरै डराउँथ्यो, त्यसैले उनले आफ्नो मालिकको स्वास्नीसित बिहे गर्नबाट रोक्न सके।
जान्नुहोस् जब भाग्नुपर्दछ
यो अझै पनि बुद्धि को बारे मा छ। धर्मशास्त्रले भन्छ कि बुद्धि नेतालाई लाभदायक हुन्छ। तपाईले भूतलाई भगाउन र बाँध्न कुर्नु हुँदैन जुन तपाईंले देख्नु हुन्न जब तपाईं आफ्नी पत्नी होइन भनेर अर्को स्त्रीसँग जान प्रलोभनमा पर्नुहुन्छ। मुचा जस्तो तपाई धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईलाई कहिले थाहा हुन्छ थाहा हुनुपर्दछ कहिले भाग्नुपर्नेछ र कहिले पछाडि फर्केर हेर्नु हुन्न।
यूसुफले आफ्नो मालिकको स्वास्नीसित बिछाउने प्रलोभनलाई जित्न सके किनकि उनीसँग केवल परमेश्वरको डर थियो, तर भाग्नुपर्दा उनलाई थाहा थियो। तपाईंले चाल्नका लागि सही समय थाहा पाउनुपर्दछ र प्रलोभन आउँदा पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्न। राजा दाऊद प्रलोभनमा परे किनकि उनले धेरैलाई हेरे र कहिले भाग्ने थाहा थिएन। कुनै पनि भूतलाई कास्ट गर्न र बाँध्न आवश्यक छैन, समाधान तपाईमा छ कि जुन दगुर्नको लागि उत्तम समय थाहा छ र पछि कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्दैन।
परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस्
प्रभुको प्रार्थनाको एक अंशले बताउँछ कि हामीलाई प्रलोभनमा पर्दैन तर हामीलाई सबै खराबीबाट छुटकारा दिन्छ। तपाईंले हेर्नु र प्रार्थना गर्नै पर्छ। धर्मशास्त्रले भन्छ, 'प्रभुको शब्द मेरा खुट्टाका निम्ति बत्ती हो, मेरो बाटोको निम्ति बत्ती हो'। जब हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दछौं, तब परमेश्वर वास्तवमा को हुनुहुन्छ र उहाँ के हुनुहुन्न भनेर हामी अझ राम्ररी बुझ्न सक्छौं।
जब हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दछौं, हामीले बिन्ती गर्नै पर्दछ कि हामीलाई प्रलोभनमा पर्न नपरोस जुन हामी सहन भन्दा पनि ठूलो हुनेछ।
तपाईंको जीवनसाथीलाई मायालुपूर्वक माया गर्नुहोस्
व्यभिचारको सबैभन्दा ठूलो कारण मध्ये एक प्रेमको कमी हो। जब परमेश्वरले १० आज्ञाहरू दिइसक्नुभएपछि ख्रीष्ट आउनुभयो, कुनचाहिँ आज्ञाहरू साँचो र महत्त्वपूर्ण छन् भनेर उनलाई सोधियो, ख्रीष्टले भन्नुभयो प्रेम भनेको त्यो हो।
जब तपाईं आफ्नो छिमेकीलाई आफैं बस्नुहुन्छ त्यति माया गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो पत्नीको परीक्षाको लागि केहि गर्न चाहनुहुन्न। प्रेमले तपाईंलाई संघमा कमिट गर्दछ, जब तपाईंको प्रतिबद्धताको स्तर एक हदसम्म पुग्छ, तपाईलाई अर्को महिला वा पुरुषसँग जान गाह्रो हुन्छ।
कसैलाई मद्दतको लागि बोल्नुहोस्
विश्वासीहरूले बनाउने समस्याहरू मध्ये एक हो कि उनीहरूलाई कसैको सहयोग आवश्यक पर्दैन भनेर सोच्दछ। हो, तपाईं ख्रीष्ट मार्फत सबै चीजहरू गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई बलियो बनाउँदछ, तथापि, भाइहरूको भेलालाई पनि त्याग्नु हुँदैन। जब आफ्नो हृदयमा व्यभिचारको प्रलोभन बढ्न थाल्छ, केवल नर्स वा त्यस्तो भावनाको साथ झगडा नगर्नुहोस्, तपाईंले व्यक्तिहरूसँग बोल्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ताकि तपाईंलाई के गलत छ भनेर कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
केहि समय तपाइँ तपाइँको पादरी वा सल्लाहकार बोल्न आवश्यक पर्दछ। तिनीहरू तपाईंलाई व्यभिचारको भावना हटाउन मद्दत गर्ने स्थितिमा छन्।
अघिल्लो लेखमा१० तपाईंको दिन सुरु गर्न धर्मशास्त्र
अर्को लेखमाN तरीकाले एकलको रूपमा व्यभिचारबाट टाढा
नेट्टी ओनुमरा तपाई जून २,, २०१ 16 साँझ :2021: १। बजे
व्यभिचारको बारेमा तपाईंको ठूलो अन्तरदृष्टिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म येशू शक्तिशाली नाममा मुक्त भएका प्रभावितहरूका लागि प्रार्थना गर्दछु।
My० मेरो जीवनको सुरक्षा र मार्गदर्शनको लागि प्रार्थना